Volkano any Amerika Avaratra | Vaovao momba ny dia
Mariela Carril | | America, Canadá, Toerana fitsangatsanganana, Etazonia, México, Ocio
Ny volkano dia porofo fa velona ny planetantsika mbola. Ny setroka, ny magma, ny lava, ny etona ary ny lavenona volkano dia mivoaka avy amin'ireo lavaka ireo ao amin'ny vatan'ny Tany, izay avy amin'ny fon'ny tany. Misy volkano lany tamingana, misy volkano tsy matory, ary misy volkano mihetsika. Lasa zatra volkano ny olombelona fa hainy ny miteraka fahasimbana be.
Raha heverinao fa manimba izy ireo, dia tsy azonao ny fomba mety hisian'ny olona mipetraka akaikin'ny volkano, fa izany no izy. Misy tanàna iray manontolo miorina eo am-pototry ny volkano mbola mavitrika izany. Raha toa ka nahatonga ny loza tany amin'ireo tanàna misy mponina an-jatony fotsiny izy ireo, inona no mety haterak'izy ireo amin'ny tanàna maoderina? Any Amerika Avaratra dia misy volkano marobe: any Canada dia misy 21 ary any Etazonia dia misy 169, 55 amin'ireo no dinihina akaiky, raha 42 kosa any Mexico.
Ny marina izany misy volkano maro any Amerika Avaratra ary maro no mihetsika na dia tsy mbola nipoaka nandritra ny zato taona sy tapany aza izy ireo. Izany no antony tsy maheno betsaka momba ny volkano amerikana avaratra. Diniho fa tamin'ny taonjato faha-1915 dia roa monja no nipoaka: Lassen tamin'ny 1980 ary St. Helens tamin'ny taona XNUMX. Tsara ny milaza fa ny ankamaroan'ny volkano amin'ity faritra amerikanina ity dia eo amoron'ny morontsiraka andrefana, eo amin'ny takelaka Pasifika mihorohoro amin'ny toerana anaovany izany. mandeha eo ambanin'ny takelaka tektonika kontinanta.
1 Volkano any Etazonia
2 Volkano any Canada
3 Volkano any Mexico
Volkano any Etazonia
Amin'ireo volkano mavitrika 169 izay ananan'i Etazonia, dia misy 55 hita ary 18 no heverina ho "fitandremana" na mety hipoaka izy ireo, ka hiteraka horohoron-tany na hisy fiantraikany amin'ny fiainan'ny olona manodidina azy. Manana volkano maro koa i Alaska, ary ny ankamaroan'izy ireo dia ao amin'ny Nosy Aleutian. Ny iray tamin'izy ireo, ny Tendrombohitra Akutan, dia namoaka lava sy lavenona nandritry ny telo volana tamin'ny 1992. Akaiky ny fotoana, tamin'ny 2005, dia nisy horohoron-tany tao amin'ny volkano Augustine ary fipoahana sivy kilometatra ny haavony. Ny volkano volkano sasany any Alaska dia Makushin, amin'ireo nosy ireo ihany: nipoaka in-34 tao anatin'ny 250 taona, ny farany tamin'ny 1995.
Mitohy amin'i Alaska ny Mount Redoubt, izay niasa tamin'ny taona 2009 ary nanery ny seranam-piaramanidina Anchorage hanidy mandritra ny 20 ora. Ny volkano lehibe indrindra any amin'ny nosy Aleutian dia ny Mount Spurr, izay nanarona lavenona Anchorage tamin'ny 1992 na dia milamina aza izy amin'izao. Ny volkano Lassen Peak dia nirefodrefotra tamim-piravoravoana tamin'ny 1915 ary ny lavenona nanasa hatrany Nevada. Lavitra an'i Alaska, misy volkano bebe kokoa any California: ny Long Valley Caldera dia nilalao nanomboka tamin'ny taona 90 ka isaky ny misy torimaso na mifoha ianao. Volkano California iray hafa no Mount Shasta, fa hatramin'ny faramparan'ny taonjato faha-XNUMX dia tsara izany.
Any Oregon dia misy volkano hafa izay matory antsasak'adiny ary ny sasany amin'izy ireo dia namorona rojo antsoina hoe Chain Devoly. Ao amin'ny fanjakan'i Washington koa dia misy volkano: misy ny Mount Baker, miambina be hatramin'ny nahitana azy magna tamin'ny 1975. Volkano iray hafa eo akaiky eo koa ny tampon-tendrombohitra Glacier, ny Mount Rainier ary ny volkano malaza indrindra eto an-tany, Santa Helena. Nipoaka ity volkano ity tamin'ny 1980 ary nahafaty olona 57.
Ary farany, tsy azo atao ny miresaka volkano amerikana avaratra sy volkano amerikanina manokana raha tsy omena anarana ny Volkano Hawaii. Ny volkano Kilauea dia nihetsiketsika maharitra nandritra ny telopolo taona ary loza mitatao mandritra ny fotoana feno. I Mauna Loa no feon-kira mihetsiketsika lehibe indrindra eran'izao tontolo izao, nipoaka tamin'ny taona 1984 ary miaina hetsika mampidi-doza ankehitriny.
Volkano any Canada
Kanada dia manana volkano amin'ny ankamaroan'ny faritany misy azy: any Alberta, British Columbia, saikinosy Labrador, ny faritra avaratrandrefana, Ontario, Nunavut, Quebec, Yukon ary Saskaychewan. Miisa manodidina ny 21 izy ireo ary eo amin'izy ireo dia azontsika atao ny miantso ny Fort Selkirk, Atlin, Tuya, Heart Peaks, Edziza, Hoodoo Mountain ary Nazko, ohatra.
Fort Selkirk dia sehatry ny volkano vaovao any afovoan'i Yukon. Lohasaha lehibe iray izay niforona teo amin'ny fihaonan'ireo hadisoana roa. Ny fipoahana tsy tapaka dia namorona kônta dimy. Volkano tanora hafa i Atlin fa any British Columbia. Ankehitriny, ny cone avo indrindra dia 1800 metatra ny haavony. Tuya dia ao amin'ny Tendrombohitra Cassiar, avaratry ny faritany iray ihany, ary manomboka amin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry. Heart Peaks no volkano fahatelo lehibe indrindra eto amin'ity faritany kanadiana ity izay malaza amin'ny volkano, ary na dia mbola tsy nipoaka aza izy hatramin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry farany dia mahavariana.
Edziza dia stratovolcano goavambe izay niforona an-tapitrisany taona. Izy io dia manana velaran-dranomandry 2 kilometatra ny sakany ary ny lalan'ny fivezivezeny dia mipetaka amin'ilay toerana. Hoodoo Mountain dia avaratry ny reniranon'i Iskut, ao amin'io faritany io ihany. Niforona tamin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry izy io ary manana satroka ranomandry eo anelanelan'ny telo sy efatra kilometatra ny hateviny, amboniny, amin'ny haavony 1750 metatra. Noho izany, mamorona glasier roa izy io. Ary farany, Nazko: volkano kely izy, misy vinavina misy fumaroles telo, ao British Columbia ihany koa, ao amin'ny afovoan-faritany ary 75 kilometatra miala an'i Quesnel. Raha ny filazan'ny mpahay siansa dia 5220 taona no tsy nipoaka izy io.
Tsy ireo ihany no volkano any Canada, fa mendrika ny santionany raha fantatrao fa misy maro sy izany ny ankamaroan'ny volkano kanadiana dia any British Columbia.
Volkano any Mexico
Ireo volkano any Mexico dia mifantoka any Baja California, avaratra andrefan'ny firenena, ireo nosy, andrefana, afovoany ary atsimo. Misy volkano 42 totalin'i Mexico ary saika ny ankamaroan'izy ireo dia ao amin'ilay antsoina hoe Pacific Ring of Fire. Ny volkano mihetsika indrindra dia i Colima, El Chichón ary Popicatepetl. Rehefa nipoaka i El Chichón, tao Chiapas, tamin'ny 1982, ohatra, dia nangatsiaka ny toetr'andro manerantany ny taona manaraka ary noheverina ho loza volkano manan-danja indrindra amin'ny tantaran'i Meksika maoderina.
Ilay volkano Colima na Volcán de Fuego dia ao amin'ny volkano ahitana an'io volkano io, Nevado de Colima ary iray hafa tena rava antsoina hoe El Cántaro, lany tamingana. Ny zandriny indrindra amin'ireo telo ireo dia heverina ho volkano mavitrika indrindra any Mexico sy eran'i Amerika Avaratra, satria efa in-efapolo no nipoaka hatramin'ny faran'ny taonjato fahafito ambin'ny folo. Izany no antony hanaraha-maso ny faritra 24 ora isan'andro.
Araka ny hitantsika, Manana volkano maro i Amerika Avaratra ary na dia tsy vaovao isan'andro aza izy ireo momba ny zavatra iray dia manara-maso ny mpahay siansa avy amin'ireo firenena telo ireo. Mahafinaritra ny fipoahan'ny volkano, izy no planeta velona amin'ny endriny rehetra, fa ankehitriny, miaraka amin'ny olona marobe eto amin'izao tontolo izao, ny fipoahana lehibe dia mety hiteraka olana sy fahasimbana maro.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » America » Canadá » Volkano any Amerika Avaratra
salami be loatra no nanompo ahy naaa mentrira tsy nanompo ahy narary io, tsy maintsy maty marary ianao
elissa dia hoy izy:
Ilaina izany satria mimenomenona ianao, kamo, manao ny enti-modinao, manameloka !, ary raha tsy tianao dia mitadiava pejy hafa, aza mitsikera, mahasoa anao izany, JOBA TSARA !!
Mamaly an'i elissa
Doris dia hoy izy:
ilaina ny sari-tany amin'ny toerana misy azy, satria tsy ho an'ny mpianatra amerikana irery ihany io
eny tsia fa ny mpianatra LATIN AMERICA koa dia mampiasa
Valio amin'i DORIS